AL-Shabaab jannada ay galaayaan ma tii Ahlu kitaabka oo kalaa?
Subject: AL-Shabaab jannada ay galaayaan ma tii Ahlu kitaabka oo kalaa? Thu Aug 26, 2010 8:53 pm
Quraanka Aayadihiisa Qaarba mar ayaa la fahmaa Sida Allaah Quraankiisa ku yiri : (Quraanka warkiisa mar Danbe ayaad ogaan doontaan )
Haddaba Allaah mar uu ka hadlaayey Ahlu Kitaabka Yuhuud iyo Nasaaro ayey waxay yiraahdeen: ( Jannada galimaayo ilaa Yuhuud iyo Nasaaro mooyee -Taas waa Rajooyinkooda -Waxaad ku dhahdaa Nabi Mohamedoow NNKH Bal Cadeymihiina keena Haddii aad Run sheegeysaan ???? )
Mar kalena waxay yiraahdeen Yuhuud &amp; Nasaaro : ( Waxaanu nahay Carruurtii Allaah iyo kuwii uu jeclaa, Waxaad ku Dhahdaa Nabi Mohamedoow Haddii aad sidaa tihiin Danbiyadiina maxaa la idiinkugu Cadaabayaa , iska dhaaf in aad tihiin carruurtii Allaah &amp; kuwii uu jeclaa’e waxaad tihiin dad ku Allaah abuuray ka mid ah….) !!!!.
Sheegashadaas oo kale weeye Janada ay galayaan AL-shabaabka is Qarxinaaya !!!!
Wuxuuse Cali kala kulmay Oraah naxdin Badan oo ah tii Nabigu yiri : ( Ugu Bishaaree Naar midka Zubeer Dila) !!!! Markaas buu naxdintii asagiina is dilay taas oo uu ku mutaysanaayo Naarta uu Nabigu sii sheegay.
Akhristoow ka waran Haddii Ruuxaas la dilay ee Muslimka ihi uu Soomanaa sidii Dhibanayaashii lagu laayey Hoteel Muna, shalay oo Talaado aheyd Cadaabtu waa ka sii weyn tahay.
Waxaan kuwii lagu laayey Hoteel Muna Allaah u weydiinaynaa in uu jannadiisa runta ah galiyo, kuwii dilayna Naartiisa galiyo sidii kii dilay Zubeer oo kale.
Waxaan halkaan ugu tacsiyeynaynaa Ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan eheledii ay ka geeriyoodeen 31 Ruux ,kuwa ku dhaawacmayna waxaan u weydiinaynaa in Allaah u boogo dhayo. AAMIIN.
Ilaahoow na badbaadi.
Subject: Re: AL-Shabaab jannada ay galaayaan ma tii Ahlu kitaabka oo kalaa? Sat Aug 28, 2010 9:30 am
xasbunalaah wa nicmal wakiil
walaal omar ma anan kaa filanaynin maqaal noocaan oo kale inaad soo qori doonto walaal waa maqaal zaaid loogu xumaada qaasatan adiga madaamaa aan u arag jiray maqaaladaada kuwo xikmado lahaay marka walaal sidee ayaad isku moogsiinaysaa kuwaas burcada ah oo umada laaynaya oo cadaw lasaaxib ah oo cadawga ay korkooda ay ka ridayaan madaaficda ay umada bakaraha ku gumadayaan ama walaal xaalada dalka ayaadan la socon marka walaal alaah ka baq maqaaladaan noocaan oo kale alaah wuu ku waydiin doonaa iyo dhiiga umadaas la daadinaayo
Subject: Re: AL-Shabaab jannada ay galaayaan ma tii Ahlu kitaabka oo kalaa? Sat Aug 28, 2010 8:30 pm
walaal waxaad sheegtay daadinta dhiig islaam in ay tahay danbi weyn ama ALLAAH sw hortiisa lagu xissbtami doono marka walaal ALSHABAB maka beri yihiin daadinta shacabka muslinka ah e maalin walbo muqdisho ku daataan mise ALSHABAB danbi malahan dhacdadaan HOTEL MUNA dadka ku jirey miyey ahaayeen gaalo dad sooman salaado miyaan dhixi karnaa dhiigoodu wuu banaanyahay?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! anigu wanku faraxsanahay xamlada soonka ee NIHAAYATUL MUCTADIIN ee iminka dadar gashay lkn waxyaabahba gaarkood waa qatar aakhiro beel iyo camal aad isleedahay JANO aad kutageysaa wuxuu kugeynnaay NAAR marka waxbadan in la hubsado aa fiican seef laboodnimo mafiicna ..................
Subject: Re: AL-Shabaab jannada ay galaayaan ma tii Ahlu kitaabka oo kalaa?